'मोदीको नेपाल भ्रमण-सम्झौता कार्यान्वयनको लागि कोशे ढुंगा' : हरीवंश झा - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
‘मोदीको नेपाल भ्रमण-सम्झौता कार्यान्वयनको लागि कोशे ढुंगा’ : हरीवंश झा
Posted by Milap Subedi | २८ बैशाख २०७५, शुक्रबार १३:१० |
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुईदिने नेपाल भ्रमणको लागी जनकपुर आईपुगेका छन । मोदीको नेपाल भ्रमणलाई लिएर विभिन्न अड्कलवाजी भईरह्को बेला यो भ्रमणले नेपालको परापुर्वककाल देखिको सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा हेडलाईन नेपालका लागी राज ढुंगानाले नेपाल भारत मामलाका विज्ञ तथा अर्थशास्त्री डा. हरीवंश झासंग कुराकानी गरेको छन ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको जानकी मन्दीर मोहलाई कसुरी बुझ्न सकिन्छ ?
खासगरी यो भ्रमण नेपाल र भारतको सामाजिक सम्बन्ध,धार्मिक सम्बन्ध, साँस्कृतिक सम्बन्ध जुन ढंगले नेपाल र भारतमा छ । त्यसको एउटा रिफ्लेक्सन हो । र उहाँको इश्वरी प्रति जानकी प्रति आघात आस्था छ, सबैभन्दा जानुभयो । त्यसपछि मात्रै उहाँ नागरिकको अभिनन्दनमा सहभागी रहनुभयो । भन्दाखेरी मोदी जी को केन्द्रविन्दु जनकपुर नै छ । त्यसले गर्दा पनि यहाँ उमंग छ । र मोदी जीले पहिला पनि आउछु भनेर आउन नपाउदाको अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै अहिले उहाँले यो ठाँउलाई महत्व दिनुभएको हो । उक हिसावले उहाँको अहिलेको नेपाल भ्रमण धार्मिक भ्रमणको रुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।
यो राजकीय भ्रमण कि धार्मिक ?
हो यो भ्रमण धार्मिक पनि छ र अफिसियल पनि छ । कुटनितित्र क्षेत्रमा धार्मिक भ्रमण बनाउने भन्ने कुरन सेकेन्डरी कुरा हो । उहाँले देशका प्रमुखहरु भेट्नेछन नेपालको विकासको कुरा पनि उठ्छन । त्यसैले यो भ्रमण अफिसियल संगै धार्मिक पनि हो ।
प्रधानमन्त्री मोदीको यो भ्रमणमा विगतको झैँ बाढीको मुद्धा उठ्छन ?
तपाईले सही भन्नुभयो । यो समस्या विकराल रुपमा रहेको छ । यसको समाधान निकाल्न सकिएन भने भोली ठुलो धनजनको क्षेती हुनसक्छ । खासगरी चुरे क्षेत्रको जंगल फँडानी भएकोले बर्षेनी बाढी आउछ । यसको प्रोपर निकास भएन । पानीको सहज निकासको लागी दुवै देशले सोच्न पर्छ यसले नेपाल भारत दुवैलाई गम्भिर असर पुर्याएको छ ।
यो मुद्धामा भारतले चासो नदेखाएको की नेपालको तयारी नपुगेको ?
यसमा दुवै कुनै न कुनै प्रकारले दोषी रहेको पाउछु । भारतले नेपाललाई दोष लगाउछ । नेपालले भारतलाई दोष लगाउछ । हामी पनि बाढी आएपछि मात्रै कराउछौ बाढी रोकिएपछि सुनसान हुन्छ । भारत एक्लैले पनि यो समस्याको समाधान गर्न सक्दैन । त्यसैले दुईवटै मुलुकको सरकारले गम्भिर भएर सोच्न पर्छ ।
सिमा विवाद सल्ट्याउन यो भ्रमणले कसरी फाईदा पुर्याउछ ?
यो कुरामा सिरियसली सोच्न पर्छ अहिले नेपालमा स्थिर सरकार पाएको अवसरमा यो कुरामा नेपालले आफ्नो स्पष्ट अडानसहित प्रस्ताव राख्न पर्छ । भारतले पनि यो विषयमा धेरै ठुलो ईस्यु मानेको छैन यो दुई छिमेकी मुलुक भएपछि यस्तो विवाद आउनु सामान्य प्रक्रिया हो त्यहीपनि अहिले धेरै विवादहरु मिलिसकेको छ । अहिलेपनि धेरै विवाद सल्ट्याउन सकिने आधारहरु छन । अहिलेको यो भ्रमणमा पनि छलफल हुन सक्छ । र त्यसले दुवै देशलाई फाईदा पुग्छ ।
त्यसोभए यो भ्रमण सम्झौता कार्यान्वयनको लागी कोशे ढुंगा सावित हुन सक्छ ?
तपाईले भनेको कुरा ठिक हो । यसभन्दा अघि नेपालका प्रधानमन्त्री ओली जी भारत भ्रमणमा जानुभयो त्यसबेला पनि हामिले विगतदेखि गरेको सम्झौताको सवालमा रहेर वार्ताहरु भए । अहिलेपनि नयाँ सम्झौता भन्दा भएका सम्झौता कार्यान्वय गर्नतिर नै दुई प्रधानमन्त्री लाग्नुहुनेछ । यसमा दुवै मुलुकको प्रमुख चासो रहेको छ । त्यसैले पनि यो भ्रमण सम्झौता कार्यान्वयनको लागि कोशे ढुंगा सावित हुन सक्छ ।
Previousहाकु वनमा जीवन विताउँदै सत्य
Nextडिजिटल पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना
‘२ नम्बर प्रदेशमा पनि हामी पहिलो शक्तिकै रुपमा स्थापित हुनेछौं’ : बरिष्ठ नेता नेपाल
१२ श्रावण २०७४, बिहीबार १०:४१
सप्तरीमा बाढीले उठिबास लगाएको तीन हजार परिवारको बेहाल
३२ श्रावण २०७४, बुधबार ०८:१९
जोशीले सम्हाले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी ! इजलास पनि तोके
१ चैत्र २०७४, बिहीबार १०:१५
प्रेस स्वतन्त्रताका लागि सन् २०१८ अँध्यारो वर्ष
१० पुष २०७५, मंगलवार १२:१४